AKHRISO: RW Rooble oo amar dul-dhigay Wasiirka Arrimaha Dibedda, & shaqaale la eryay – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
AKHRISO: RW Rooble oo amar dul-dhigay Wasiirka Arrimaha Dibedda, & shaqaale la eryay
May 23, 2022 Xuseen 3
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa ka horyimid isbedel lagu sameeyay qaar kamid ah shaqaalaha Wasaaradda Arrimaha Dibedda DFS.
Waraaq kasoo baxday Ra’iisul Wasaare Rooble, ayaa lagu wargeliyay Wasiirka Arrimaha Dibedda XFS, in laga bilaabo 1 Janaayo 2022 shaqaalaha dowladda ee la bedelay ama shaqada laga qaaday aanay waafaqsaneyn go’aankii Golaha Wasiirada.
Sidoo kale, Ra’iisul Wasaaraha ayaa faray Wasiir Cabdi-siciid Muuse in dhammaan shaqaalahaas dib loogu fasaxo howlahooda shaqo, dibna loogu celiyo goobihii iyo xafiisyadii ay ka shaqeynayeen si ay u gutaan waajibaadkooda shaqo.
Ugu dambeyn, Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa faray dhammaan hey’addaha dowladda ee warqadan ogeysiinta lala socodsiiyay inay qabsadaan howlaha kaga aadan fulinta amarkan.
Dhaqan Mooryaan isma beddelo! Dorraad waxaan arkayey 30 jir oo talihii Nisa ee airportka xilkiisa ka eryey, Haddeerna wuxuu Rooble ku leeyahay, laga soo billaabo 01.01 wixii shaqaale ah oo xil laga eryey waa in lagu celiyo!
Wuxuu rabaa in uu qiil u sameeyo dhawr Safaaradood oo aay kamid tahay tan Talyaaniga oo uu Wasiirka kal hore xilka ka qaaday Mooryaan is laheeysiisay oo ka amar diiday in uu qiil u sameeyo!
Oo illaa iyo waqtigaas oo sheegay meeqa ayaan arkeeyney Rooble oo Dad xil ka eryaya mid Cusubna magacaabaya iyo Farmaajo oo ka daa leh!
Rooble saddex Agaasime oo beeshiisa ah ayuu billowgii bishan magacaay, kuwii sii joogayna wuu ka qaaday, Farmaajana sharci darro ayuu ku sifeeysey!
Macallinow Alif wax buu leeyahay iyo ma leh kala daa!!
Hawiye Labada xil wasiir Ka maqan waa wasiir arrimaha dibadda iyo wasiirka maaliyadda ..
Jagada wasiirka maaliyadda uma dhowaan karaan waxaa jooga nin cabqari oo bartey sida loo karbaasho hawiye ..Beyle wuxuu dejistey nidaam adag aan marnaba looga maarmin arrimaha maaliyadda Soomaaliya ..wuxuu haydaha caalamuga sida IMF iyo World Bank Ka dhaadhiciyey in hawiye mooryaan ruugo ah yihiin oo lagu aaminikarin lacagta iyo hantida Soomaaliya ..Waxaa isku xiran Beyle iyo mucaawinada Soomaaliya lasiinayo.
Wasiirada wasaaradda arrimaha dibadda Kan haatan jooga iyo kii Ka horreeyey wax macna ah ay lajoogaan baa jirin ..
Reer PUNTLAND weey ku faraxsanyiheen in la bahdilo CABDISACIID MUUSE. Waayo, XAAR FARMAAJO oo gabalkiiso dhacayyo ayuu ka soo qaaday USD200,000 se uu khalkhal amni darro ka sameeyo GAALKACAYO.
CABDI-SACIID MUUSE waa nin daciif ah, oo dadkiisi u horseedi lahaa in ayh dagaalamaan. Hase yeeshee, REER GAALKACAYHO oo ah dad fariidiin ah oo caqli badan, intii lacagtii ka qaateen, ayee dib u qaybsadeen..
Ugu dambiintiina, Suldaank jufada CABDI SACIID MUUSE ayaa ku yidhi, adeer, qori-dab ah baad la wareegaysaa, ee deg deg uga bax magaalada GAALKACAYO inta aan lagugu dilin.
Suldaanku wuxuu xasuusiyey, in CABDI SACIID MUUSE uu garan waayey, wixii uu sameeyey kii isaga ka horeeyey ee MOXAMED CABDIRZAAQ ABOKAR oo isku khilaafeen XAAR FARMAAJO in uu maleego dhagar reer GAALKACAYO.
Hase yeeshee, kani, CABDI SACIID MUUSE waa doqon aan dibada laga soo xareesan..